आज पनि सोच्नै नसक्ने गरि सुनको मुल्य घट्यो, कतिमा हुदै छ कारोबार ? - jagritikhabar.com
आज पनि सोच्नै नसक्ने गरि सुनको मुल्य घट्यो, कतिमा हुदै छ कारोबार ?
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८०० ले घटेर रु ९३ हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९३ हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार ५०० कायम भएको छ जसको मूल्य सोमबार प्रतितोला रु ९३ हजार ३०० तोकिएको थियो ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १० ले घटेर रु एक हजार २३५ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ७९२ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा तीन वर्षअघि म्याग्दीमा खोलिएका अधिकांश होमस्टे (घरबास) बन्द भएका छन् । एक जना पनि पर्यटक र पाहुनाले सेवा पाउन नसकेको होमस्टेमा भएको राज्यको लाखौँ लगानी बालुवामा पानी हालेसरह बनेको छ । पाहुनाको बसोबासको बाहनामा बनाइएका पूर्वाधार पहुँचवालाको व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोगमा सीमित भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्याग्दीका १० वटा होमस्टेलाई रु ९३ लाख चार हजार ८०० अनुदान बाँडेको थियो । कूल लागतको ३० प्रतिशत लागनी गरेको हिसाब देखाएर अनुदान हत्याएका होमस्टेले पर्यटक लोभ्याउन र ग्रामीण पर्यटनको विकासमा योगदान गरेको पाइँदैन । होमस्टेका लागि भनेर बनाइएका सामुदायिक भवन, गोलघर, शौचालय, शयनकक्ष र बेड विस्तारा अनुदान पाएकाको व्यक्तिगत सम्पतिमा परिणत भएका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमको हजुरको सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक कृष्णबहादुर भण्डारीले आधारभूत पूर्वाधार बनाए पनि होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रचार–प्रसार, तालिम र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको झिँ होमस्टेले रु नौ लाख ३९ हजार, एकता होमस्टे मौवाफाँटले रु नौ लाख ६० हजार, मिलन होमस्टे रायखोरले रु नौ लाख ७३ हजार र रानीपौवा होमस्टेले रु नौ लाख ७० हजार अनुदान लगेका थिए ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन कार्यालय पोखराले यसअघि अनुदान पाएका होमस्टेलाई स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन हालै प्रस्ताव मागेकामा म्याग्दीका तीनवटाको मात्र प्रस्ताव परेको छ । आवेदन सङ्कलन गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले झिँ, झाँक्रीपानी र हजुरको सामुदायिक होमस्टेले मात्र स्तरोन्नति कार्यक्रम माग गरेका बताउनुभयो ।
आवश्यकता र सम्भावनाको भन्दा पनि पहुँचका आधारमा अनुदान पाएका म्याग्दीका अधिकांश होमस्टे प्रभावहीन देखिएका छन् । होमस्टेका लागि बनाइएको सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन र जीर्ण बनेको रानीपौवा होमस्टेका अध्यक्ष दीपक कार्कीले कोरोनाका कारण पर्यटक नआएका र पूर्वाधारले पूर्णता नपाउँदा चलाउन समस्या भएको दाबी गर्नुभयो ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमको किसानी मावि र प्राविधिक शिक्षालयमा निर्माण भएको चारवटा भवनको सोमबार एकैदिन उद्घाटन भएको छ । रु एक करोड ७६ लाख लागतमा लायन्स क्लबको अन्तर्राष्ट्रिय कोषले किसानी प्राविधिक शिक्षालयमा फर्निचरसहित तीनतले, आठकोठे भवन र शौचालय निर्माण गरेको छ । सो भवनको लायन्स क्लबका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय खेतानले उद्घाटन गर्नुभएको लायन्स अभियानकर्मी सन्तोष रावलले जानकारी दिनुभयो ।
दुईतले भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन अपाङ्गमैत्री छ । बाली र पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा तहसम्मको पठनपाठन हुने शिक्षालयमा २०७ विद्यार्थी रहेका प्रमुख करन कँडेलले बताउनुभयो । लायन्स क्लबले यसअघि सिभिल इञ्जीनियरिङ विषयको पढाइ हुने बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीको गलेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा आठकोठे भवन निर्माण गरेको थियो । बाँकी तीनवटा किसानी माविको कक्षा कोठा भवन तत्कालीन शिक्षा कार्यालय, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको हो । एउटा चारकोठे भवनको नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले, १० कोठे भवन पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र अर्को चारकोठे भवन शिक्षक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
चारकोठे भवन निर्माणका लागि शिक्षा कार्यालयले रु ३५ लाख र अर्को चारकोठे भवन बनाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले रु ७० लाख उपलब्ध गराएको थियो । मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा बनेको १० कोठे तीनतले भवन निर्माणको लागत विवरण माग्दा विद्यालयका प्रअ जङ्गबहादुर गर्बुजाले फोन उठाउनुभएन । साधारणतर्फ कक्षा १२ सम्मको पढाइ हुने किसानी माविमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्राविधिक शिक्षालयमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश, पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति, नमूना तथा आवासीय विद्यालय कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । कार्यक्रममा एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका, उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु, वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीलगायतको उपस्थिति थियो ।